မွနျမာတို့ရဲ့ “အမြိုး ဘာသာ သာသနာ” – Kyaw Zaw Oo's Blog
July 9, 2016 March 1, 2019 kyaw zaw oo
မွနျမာတို့ရဲ့ “အမြိုး ဘာသာ သာသနာ”
မြန်မာတို့ရဲ့ “အမျိုး ဘာသာ သာသနာ”
Written by – ကျော်ဇောဦး
“အမျိုး ဘာသာ သာသနာ” ဆိုတဲ့ အယူအဆ ဟာ မင်းကြီးညိုလက်ထက်က စတင်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ် လို့ ဆိုကြတယ်။
အရှေ့တောင်အာရှသမိုင်းမှာ အကြီးမားအကျယ်ပြောဆုံး နယ်မြေလွှမ်းမိုးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ အင်ပါယာ တစ်ခုရဲ့ မင်းနေပြည်တော် ဖြစ်လာမယ့် ကေတုမတီ တောင်ငူမြို့ကို မင်းကြီးညို အစပျိုး အားမွေးခါစမှာ တောင်ငူဟာ အင်းဝရွှေနန်းတော်ရဲ့ လက်အောက်ခံ မြို့ငယ်မျှသာဖြစ်တယ်။
ခရစ်နှစ် ၁၅၁၀ မှာ တောင်ငူမြို့ကို မင်းကြီးညို ထူထောင်တယ်။ နောက်ထပ် (၁၇)နှစ် အကြာ ၁၅၂၇-ခုနှစ်မှာ ဗမာနိုင်ငံတော် ရဲ့ မြို့တော် အင်းဝရွှေနန်းတော်ကို ရှမ်းလူမျိူး သိုဟန်ဘွား က သိမ်းပိုက်စိုးစံတယ်။ သိုဟန်ဘွား ကနေ အုန်းဘောင်ခုံမှိုင်း ၊ ထို့နောက် မိုးဗြဲနရပတိ အထိ ရှမ်းမင်းသုံးဆက်ဟာ ၁၅၄၇-ခုနှစ် အထိ အင်းဝထီးနန်းကို စိုးစံအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတယ်။
အင်းဝကို ရှမ်းတွေသိမ်းပိုက်လိုက်တာနဲ့ အင်အားကြီးဗမာလူမျိုးရဲ့ အာဏာဗဟိုချက်မ ဟာ ယာယီ ပျောက်ဆုံး သွားခဲ့တယ်။ အဲသည်အချိန်မှာ တည်ငြိမ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကို ဖန်တီးနိုင်တဲ့ တောင်ငူမြို့နဲ့ဝန်းကျင်ကို ဗမာ လူဦးရေ တော်တော်များများ ပြောင်းရွေ့လာခဲ့ကြတယ်။ တောင်ငူ စတင်ဖွံ့ဖြိုးလာတယ်။ အုပ်ချုပ်သူရဲ့ ဂုဏ်သတင်း မွှေးကြိုင်မှုဟာလည်းပဲ အုပ်ချုပ်ခံလူဦးရေများပြားတိုးပွားဖို့ကို အထောက်အကူပြုပါတယ်။
တောင်ငူဟာ ဗမာလူဦးရေဖြန့်ကျက်တည်ရှိရာ မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းရဲ့အလယ်တည့်တည့်မှာ ရှိမနေဘူး။ မွန်လူဦးရေကြီးမားလွှမ်းခြုံရာ အောက်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကို နီးတယ်။ မွန်လူဦးရေ အစုအဖွဲ့တစ်ရပ်ဟာလည်း ပေါ်ထွန်းခါစ တောင်ငူအုပ်ချုပ်မှု လက်အောက်မှာ ရှိနေတယ်။ ဒါ့အပြင် သုတေသီတချို့ရဲ့အဆိုအရ တောင်ငူ စတည်ခါစမှာ သံတွဲရခိုင်သား အချို့ကိုနေရာချထားပေးခဲ့တယ် လို့လည်း ဆိုကြတာရှိသေးတယ်။ ပြောချင်တဲ့ လိုရင်းအချက်က တောင်ငူရဲ့လူဦးရေဖွဲ့စည်းမှုအချိုးအစား ဟာ အင်းဝရဲ့ လူဦးရေဖွဲ့စည်းမှု အချိုးအစားနဲ့ မတူဘူး။ ဗမာတွေ ချည်းသက်သက် မဟုတ်ဘူး။
ဒီတော့ အသစ်ပေါ်ခါစ “တောင်ငူ” မြို့ပြနိုင်ငံငယ်ကလေးရဲ့ စုဖွဲ့ရပ်တည်ကြရမှု အကြောင်းရင်းခံ အဖြစ် ဗမာ တစ်မျိုးတည်းကို အခြေခံတဲ့ ဗမာမျိုးချစ်ဝါဒသက်သက်နဲ့ စုစည်းမရနိုင်ဘူး။ ပိုမိုကျယ်ပြန်တဲ့ ဘုံတူညီချက် တွေနဲ့လည်း စုစည်းရပ်တည်ကြဖို့လိုအပ်တယ်။ (ထိုစဉ်က ထိပါးခြင်းခံရတဲ့) မွန်လူမျိုး ဗမာလူမျိုးတို့ရဲ့ ကိုးကွယ်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ မိမိတို့ ကျောချင်းကပ်ရပ်တည်ကြရမယ့် ဘုံတူညီချက်တစ်ရပ် ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို မိမိတို့ မြို့ပြ နိုင်ငံသားတွေ သဘောတူလက်ခံနိုင်ကြမယ့်အချက် အဖြစ် ပေါ်ထွက်လာတယ်။ ဒီတော့ ထိုခေတ် ပေါ်ထွန်းစ တောင်ငူ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို စုစည်းပေးတဲ့ ခံယူချက်ဟာ “အမျိုး ဘာသာ သာသနာ” ကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ကြဖို့ ဆိုတဲ့ ခံယူချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုခံယူချက်အားဖြင့် တောင်ငူဟာ စတင် စုစည်းနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီ့နောက် ဆက်လက် ကြီးထွားခဲ့ တယ်။ ဘုရင့်နောင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာ အရှေ့တောင်အာရှသမိုင်းရဲ့ အကျယ်ပြောဆုံး နယ်မြေ သိမ်းပိုက်နိုင်မှု အားဖြင့် အင်ပါယာတစ်ခု ဖြစ်ထွန်းစေခဲ့တယ်။
တောင်ငူခေတ်ကို ဆက်ခံတဲ့ ညောင်ရမ်းခေတ် က အနောက်ဘက်လွန်မင်းလက်ထက်မှာ “အမျိုး ဘာသာ သာသနာ” ခံယူချက်အားဖြင့် စေ့ဆော်လုပ်ဆောင်မှုတွေအားဖြင့် အမျိုးသားဆက်လက်တည်တံ့ရေး လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကို မြင်သာနိုင်တယ်။ သံလျင်ကိုအခြေပြုကာ ကိုယ်ပိုင် ဘုရင့်နိုင်ငံ တည်ထောင်တဲ့ ဒီဘရစ်တို ဦးဆောင်တဲ့ ပေါ်တူဂီတွေရဲ့ နယ်မြေချဲ့ထွင်မှုကို အစတုံး ချေမှုန်းနိုင်ခဲ့တယ်။ ဘုရားပုထိုးကရတဲ့ သတ္တုတွေနဲ့ အမြောက်သွန်းတဲ့ ရန်သူတွေကို ရှင်းလင်းပစ်ခဲ့တယ်။ သံလျင်ကို ဗဟိုပြုပြီး မြန်မာပြည် အောက်ပိုင်း ကမ်းခြေကို ပေါ်တူဂီတွေကသာ ရာစုနှစ်တွေနဲ့ချီပြီး ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်ခဲ့ရင်၊ အထက်က ပဲခူးတို့၊ အင်းဝတို့ဟာ ကုန်းတွင်းပိတ်အနေနဲ့သာ ရှိနေခဲ့ပြီး မြန်မာဟာ နိုင်ငံတစ်ဖန် ထူထောင်နိုင်တဲ့ အင်အားရှိ လာနိုင်စေမယ့် ကြီးထွားမှုကို လျော့ပါးအားနည်းကောင်း အားနည်းစေခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ မျက်မှောက်ခေတ်ကာလမှာလည်း “အမျိုး ဘာသာ သာသနာ” လို့ ပါးစပ်ကပြောသည် ဖြစ်စေ မပြောသည်ဖြစ်စေ အမျိုးသားရေးအသွင်လက္ခဏာတွေရှင်သန်နေတဲ့ နိုင်ငံတည်တံ့ရေးကို မလွဲမသွေ လုပ်ဆောင် နေကြရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယလို ကြီးပေ့ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတောင်မှ လူဦးရေထဲမှာ ဘာသာရေးကိုးကွယ်သူ အချိုးအစားပြောင်းလဲမှုကို မျက်ခြေမပြတ် ထည့်တွက်ကြရတဲ့ သဘောရှိတယ်။
ဘင်္ဂလီတွေနေတဲ့ ဘင်္ဂလားနယ်ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုပါသွားမယ့် ဟိန္ဒူအများစုနေတဲ့ အပိုင်း နဲ့ အရှေ့ပါကိစ္စတန် (နောင် ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ်) ဖြစ်သွားမယ့် မူဆလင်အများစု နေထိုင်တဲ့ အပိုင်းလို့ ၁၉၄၇-ခုနှစ်မှာ နှစ်ပိုင်း ခွဲခြမ်းခဲ့ကြတယ်။ ခွဲခြမ်းခါစကာလမှာ အိန္ဒိယဘက်ကို ပါသွားတဲ့ အပိုင်းမှာ မူဆလင် (၁၂) % ရှိပြီး၊ ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် ဖြစ်သွားမယ့် အပိုင်းမှာ ဟိန္ဒူ (၃၀)% ရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂၀၁၁ သန်းခေါင်စာရင်းအရ အိန္ဒိယဘက်ကို ပါသွားတဲ့ အပိုင်းမှာ မူဆလင် (၂၇)% အထိ တိုးလာပြီး၊ ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် ဖြစ်သွားတဲ့ အပိုင်းမှာ ဟိန္ဒူ (၈)% အထိ နည်းသွားခဲ့တယ်။ မူဆလင်တွေလူဦးရေတိုးနှုန်းများခြင်း နဲ့ ဘာသာပြောင်းရန် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဖိအား ပေးမှု ရှိနေခြင်း တို့တွက်ကြောင့် နှစ်ခြမ်းစလုံးမှာ ဟိန္ဒူနည်းလာပြီး မူဆလင်များလာတာ လို့ ဆိုပါတယ်။
V.S. Naipaul ရေးသားတဲ့ “Beyond Beliefs: Islamic Excursions Among the Converted Peoples” ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ အရင်က ဖာရစီ၊ ဟိန္ဒူ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို ကိုးကွယ်ခဲ့ကြတဲ့ နိုင်ငံတွေ လူမျိုးတွေဟာ အစ္စလမ်ဘာသာကို ပြောင်းလဲကိုးကွယ်တဲ့ နိုင်ငံတွေ လူမျိုးတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပုံကို ကွင်းဆင်းလေ့လာ သုံးသပ် ရေးသားထားပါတယ်။ ဥပမာ – အီရန်၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ပါကိစ္စတန်၊ အာဖဂန်နစ္စတန် စတဲ့ နိုင်ငံတွေအကြောင်းကို ရေးသားထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း သူတို့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ အလားတူ အတွေ့အကြုံ အချို့ကို တွေ့ကြုံ ဖြတ်သန်းနေကြရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိတို့ ဒီကနေ့ ပြောနေကြတဲ့ “အမျိုး ဘာသာ သာသနာ” အရေးမှာ – ဒီဘက်က တောင့်ခံကြတဲ့သူတွေ ရှိသလို ဟိုဘက်က ပါနေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်။ ဒီဘက်က တောင့်ခံနေကြတဲ့သူတွေရှိသလို အခြား တစ်ဘက်မှာ ဒီဘက်က လူတွေကို အပြို ဖြိုချင်နေတဲ့ သူတွေရှိတယ်။
“အမျိုး” ကိစ္စနဲ့ “ဘာသာ သာသနာ” ကိစ္စ တွေမှာ တူရူချက်တွေ ရှိနေပုံကို မြင်ရပါတယ်။
“အမျိုး” ကိစ္စ။ ဒီနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံသားတွေဟာ သွေးအားဖြင့် ဆင်းသက်သူတွေ (blood descendent) တွေ ဖြစ်ရမယ်၊ soil descendent ဆိုတာမျိုး ဒီမြေမှာမွေးတာနဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်မယ် လို့ သတ်မှတ်မပေးတဲ့ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေဖြင့် တိတိပပ ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။ ဒီ ၈၂ ဥပဒေကို ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်စေလိုသူတွေ ရှိတယ်။ အခြား တစ်ဖက်မှာ ဒီဥပဒေတွေကို အပေါက်ဖောက်ပြီး နိုင်ငံသားပေးပစ်လိုက် ချင်နေကြသူတွေရှိတယ်။
“ဘာသာ သာသနာ” ကိစ္စ။ ဒီ “ဘာသာ သာသနာ” ကိစ္စကို ဘာသာ သာသနာလို့ချည်းသက်သက်မမြင်ဘဲ နဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကိစ္စလို့ မြင်ကြည့်နိုင်ရင် မိမိတို့ ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေ ရဲ့ အားထုတ်မှုကို နားလည်မှု ပိုပေးနိုင် ပါလိမ့်မယ်။ ယဉ်ကျေးမှုချင်း ထိပ်တိုက်တွေ့ကြတဲ့အခါ မိမိတို့ အစဉ်အဆက် ကျင့်သုံးရာ ဓလေ့ထုံးတမ်း၊ ယဉ်ကျေးမှုကို ပွန်းပဲ့ပပျောက်သွားတာ မဖြစ်စေလိုတဲ့အတွက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတာ လက်ဆင့်ထပ်ကမ်းနိုင်အောင် ကြိုးစားနေတာပါ လို့ ရှုမြင်နိုင်ရင် ပြဿနာကို ဒီထက်မက နားလည်နိုင် ပါလိမ့်မယ်။ ယဉ်ကျေးမှုလို့ မြင်ကြည့်မယ့်အစား ဘာသာရေး လို့ပဲ မျက်မြင်လက္ခဏာရပ် တစ်ခုတည်းကို ကောက်ယူပြီး သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်မှုလုပ်နေရင် . . . ကျမ်းမှာပါတဲ့အတိုင်း မကျင့်ရကောင်းလား အပြစ်တင်ဖို့ကိုပဲ ကြည့်နေရင် . . . စာအုပ်ကြီးအတိုင်း လောကီ နဲ့ လောကုတ် ထက်ခြမ်းခြမ်းဖို့ကြိုးစားနေရင် . . . ဌာနတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ ပင်မရေစီး ယဉ်ကျေးမှုကို အပြုတ်ဖြုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေမှန်း သိသာလွန်းနေရင် . . . ၀မ်းနည်းစရာ ဖြစ်ရပ်များဆီ ဦးတည်သွားမှာကိုပဲ စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်းသဘောကို မနုဿဗေဒအရ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း နားလည် ပေးလိုက်တာက အမြင်များကို ရှင်းလင်းစေပါတယ်။
ဒီအချက်တွေကို မဖြစ်မနေ ထောက်ပြဖို့လိုအပ်လို့ ထောက်ပြ ပြောဆိုရှင်းလင်းတာက တစ်ပိုင်း. . . တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု (rule of law) မရှိ လုပ်ချင်ရာလုပ်ကြတာကို လက်မခံတာက တစ်ပိုင်း ဖြစ်ပါတယ် ရယ် လို့ ဆောင်းပါး အဆုံးသတ်မှာပြောခဲ့ပါရစေ။
၂၀၁၆-ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၉) ရက်
Written by – ကြျောဇောဦး
“အမြိုး ဘာသာ သာသနာ” ဆိုတဲ့ အယူအဆ ဟာ မငျးကွီးညိုလကျထကျက စတငျခဲ့တာဖွဈနိုငျတယျ လို့ ဆိုကွတယျ။
အရှတေ့ောငျအာရှသမိုငျးမှာ အကွီးမားအကယျြပွောဆုံး နယျမွလှေမျးမိုးသိမျးပိုကျနိုငျခဲ့တဲ့ အငျပါယာ တဈခုရဲ့ မငျးနပွေညျတျော ဖွဈလာမယျ့ ကတေုမတီ တောငျငူမွို့ကို မငျးကွီးညို အစပြိုး အားမှေးခါစမှာ တောငျငူဟာ အငျးဝရှနေနျးတျောရဲ့ လကျအောကျခံ မွို့ငယျမြှသာဖွဈတယျ။
ခရဈနှဈ ၁၅၁၀ မှာ တောငျငူမွို့ကို မငျးကွီးညို ထူထောငျတယျ။ နောကျထပျ (၁၇)နှဈ အကွာ ၁၅၂၇-ခုနှဈမှာ ဗမာနိုငျငံတျော ရဲ့ မွို့တျော အငျးဝရှနေနျးတျောကို ရှမျးလူမြိူး သိုဟနျဘှား က သိမျးပိုကျစိုးစံတယျ။ သိုဟနျဘှား ကနေ အုနျးဘောငျခုံမှိုငျး ၊ ထို့နောကျ မိုးဗွဲနရပတိ အထိ ရှမျးမငျးသုံးဆကျဟာ ၁၅၄၇-ခုနှဈ အထိ အငျးဝထီးနနျးကို စိုးစံအုပျခြုပျခဲ့ကွတယျ။
အငျးဝကို ရှမျးတှသေိမျးပိုကျလိုကျတာနဲ့ အငျအားကွီးဗမာလူမြိုးရဲ့ အာဏာဗဟိုခကျြမ ဟာ ယာယီ ပြောကျဆုံး သှားခဲ့တယျ။ အဲသညျအခြိနျမှာ တညျငွိမျတဲ့အုပျခြုပျရေးကို ဖနျတီးနိုငျတဲ့ တောငျငူမွို့နဲ့ဝနျးကငျြကို ဗမာ လူဦးရေ တျောတျောမြားမြား ပွောငျးရှလေ့ာခဲ့ကွတယျ။ တောငျငူ စတငျဖှံ့ဖွိုးလာတယျ။ အုပျခြုပျသူရဲ့ ဂုဏျသတငျး မှေးကွိုငျမှုဟာလညျးပဲ အုပျခြုပျခံလူဦးရမြေားပွားတိုးပှားဖို့ကို အထောကျအကူပွုပါတယျ။
တောငျငူဟာ ဗမာလူဦးရဖွေနျ့ကကျြတညျရှိရာ မွနျမာနိုငျငံအထကျပိုငျးရဲ့အလယျတညျ့တညျ့မှာ ရှိမနဘေူး။ မှနျလူဦးရကွေီးမားလှမျးခွုံရာ အောကျမွနျမာနိုငျငံဘကျကို နီးတယျ။ မှနျလူဦးရေ အစုအဖှဲ့တဈရပျဟာလညျး ပျေါထှနျးခါစ တောငျငူအုပျခြုပျမှု လကျအောကျမှာ ရှိနတေယျ။ ဒါ့အပွငျ သုတသေီတခြို့ရဲ့အဆိုအရ တောငျငူ စတညျခါစမှာ သံတှဲရခိုငျသား အခြို့ကိုနရောခထြားပေးခဲ့တယျ လို့လညျး ဆိုကွတာရှိသေးတယျ။ ပွောခငျြတဲ့ လိုရငျးအခကျြက တောငျငူရဲ့လူဦးရဖှေဲ့စညျးမှုအခြိုးအစား ဟာ အငျးဝရဲ့ လူဦးရဖှေဲ့စညျးမှု အခြိုးအစားနဲ့ မတူဘူး။ ဗမာတှေ ခညျြးသကျသကျ မဟုတျဘူး။
ဒီတော့ အသဈပျေါခါစ “တောငျငူ” မွို့ပွနိုငျငံငယျကလေးရဲ့ စုဖှဲ့ရပျတညျကွရမှု အကွောငျးရငျးခံ အဖွဈ ဗမာ တဈမြိုးတညျးကို အခွခေံတဲ့ ဗမာမြိုးခဈြဝါဒသကျသကျနဲ့ စုစညျးမရနိုငျဘူး။ ပိုမိုကယျြပွနျတဲ့ ဘုံတူညီခကျြ တှနေဲ့လညျး စုစညျးရပျတညျကွဖို့လိုအပျတယျ။ (ထိုစဉျက ထိပါးခွငျးခံရတဲ့) မှနျလူမြိုး ဗမာလူမြိုးတို့ရဲ့ ကိုးကှယျရာ ဗုဒ်ဓဘာသာဟာ မိမိတို့ ကြောခငျြးကပျရပျတညျကွရမယျ့ ဘုံတူညီခကျြတဈရပျ ဖွဈတယျ ဆိုတာကို မိမိတို့ မွို့ပွ နိုငျငံသားတှေ သဘောတူလကျခံနိုငျကွမယျ့အခကျြ အဖွဈ ပျေါထှကျလာတယျ။ ဒီတော့ ထိုခတျေ ပျေါထှနျးစ တောငျငူ လူ့အဖှဲ့အစညျးကို စုစညျးပေးတဲ့ ခံယူခကျြဟာ “အမြိုး ဘာသာ သာသနာ” ကို ကာကှယျ စောငျ့ရှောကျကွဖို့ ဆိုတဲ့ ခံယူခကျြ ဖွဈပါတယျ။ ထိုခံယူခကျြအားဖွငျ့ တောငျငူဟာ စတငျ စုစညျးနိုငျခဲ့တယျ။ ဒီ့နောကျ ဆကျလကျ ကွီးထှားခဲ့ တယျ။ ဘုရငျ့နောငျရဲ့ခေါငျးဆောငျမှုအောကျမှာ အရှတေ့ောငျအာရှသမိုငျးရဲ့ အကယျြပွောဆုံး နယျမွေ သိမျးပိုကျနိုငျမှု အားဖွငျ့ အငျပါယာတဈခု ဖွဈထှနျးစခေဲ့တယျ။
တောငျငူခတျေကို ဆကျခံတဲ့ ညောငျရမျးခတျေ က အနောကျဘကျလှနျမငျးလကျထကျမှာ “အမြိုး ဘာသာ သာသနာ” ခံယူခကျြအားဖွငျ့ စဆေ့ျောလုပျဆောငျမှုတှအေားဖွငျ့ အမြိုးသားဆကျလကျတညျတံ့ရေး လုပျဆောငျနိုငျခဲ့တာကို မွငျသာနိုငျတယျ။ သံလငျြကိုအခွပွေုကာ ကိုယျပိုငျ ဘုရငျ့နိုငျငံ တညျထောငျတဲ့ ဒီဘရဈတို ဦးဆောငျတဲ့ ပျေါတူဂီတှရေဲ့ နယျမွခြေဲ့ထှငျမှုကို အစတုံး ခမြှေုနျးနိုငျခဲ့တယျ။ ဘုရားပုထိုးကရတဲ့ သတ်တုတှနေဲ့ အမွောကျသှနျးတဲ့ ရနျသူတှကေို ရှငျးလငျးပဈခဲ့တယျ။ သံလငျြကို ဗဟိုပွုပွီး မွနျမာပွညျ အောကျပိုငျး ကမျးခွကေို ပျေါတူဂီတှကေသာ ရာစုနှဈတှနေဲ့ခြီပွီး ခြုပျကိုငျထားနိုငျခဲ့ရငျ၊ အထကျက ပဲခူးတို့၊ အငျးဝတို့ဟာ ကုနျးတှငျးပိတျအနနေဲ့သာ ရှိနခေဲ့ပွီး မွနျမာဟာ နိုငျငံတဈဖနျ ထူထောငျနိုငျတဲ့ အငျအားရှိ လာနိုငျစမေယျ့ ကွီးထှားမှုကို လြော့ပါးအားနညျးကောငျး အားနညျးစခေဲ့မှာဖွဈပါတယျ။
ယနေ့ မကျြမှောကျခတျေကာလမှာလညျး “အမြိုး ဘာသာ သာသနာ” လို့ ပါးစပျကပွောသညျ ဖွဈစေ မပွောသညျဖွဈစေ အမြိုးသားရေးအသှငျလက်ခဏာတှရှေငျသနျနတေဲ့ နိုငျငံတညျတံ့ရေးကို မလှဲမသှေ လုပျဆောငျ နကွေရမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အိန်ဒိယလို ကွီးပဆေို့တဲ့ နိုငျငံတောငျမှ လူဦးရထေဲမှာ ဘာသာရေးကိုးကှယျသူ အခြိုးအစားပွောငျးလဲမှုကို မကျြခွမေပွတျ ထညျ့တှကျကွရတဲ့ သဘောရှိတယျ။
ဘင်ျဂလီတှနေတေဲ့ ဘင်ျဂလားနယျကို အိန်ဒိယနိုငျငံဘကျကိုပါသှားမယျ့ ဟိန်ဒူအမြားစုနတေဲ့ အပိုငျး နဲ့ အရှပေ့ါကိစ်စတနျ (နောငျ ဘင်ျဂလာဒရှေျ့) ဖွဈသှားမယျ့ မူဆလငျအမြားစု နထေိုငျတဲ့ အပိုငျးလို့ ၁၉၄၇-ခုနှဈမှာ နှဈပိုငျး ခှဲခွမျးခဲ့ကွတယျ။ ခှဲခွမျးခါစကာလမှာ အိန်ဒိယဘကျကို ပါသှားတဲ့ အပိုငျးမှာ မူဆလငျ (၁၂) % ရှိပွီး၊ ဘင်ျဂလာဒရှေျ့ ဖွဈသှားမယျ့ အပိုငျးမှာ ဟိန်ဒူ (၃၀)% ရှိခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ ၂၀၁၁ သနျးခေါငျစာရငျးအရ အိန်ဒိယဘကျကို ပါသှားတဲ့ အပိုငျးမှာ မူဆလငျ (၂၇)% အထိ တိုးလာပွီး၊ ဘင်ျဂလာဒရှေျ့ ဖွဈသှားတဲ့ အပိုငျးမှာ ဟိန်ဒူ (၈)% အထိ နညျးသှားခဲ့တယျ။ မူဆလငျတှလေူဦးရတေိုးနှုနျးမြားခွငျး နဲ့ ဘာသာပွောငျးရနျ နညျးမြိုးစုံနဲ့ ဖိအား ပေးမှု ရှိနခွေငျး တို့တှကျကွောငျ့ နှဈခွမျးစလုံးမှာ ဟိန်ဒူနညျးလာပွီး မူဆလငျမြားလာတာ လို့ ဆိုပါတယျ။
V.S. Naipaul ရေးသားတဲ့ “Beyond Beliefs: Islamic Excursions Among the Converted Peoples” ဆိုတဲ့စာအုပျမှာ အရငျက ဖာရစီ၊ ဟိန်ဒူ၊ ဗုဒ်ဓဘာသာတှကေို ကိုးကှယျခဲ့ကွတဲ့ နိုငျငံတှေ လူမြိုးတှဟော အစ်စလမျဘာသာကို ပွောငျးလဲကိုးကှယျတဲ့ နိုငျငံတှေ လူမြိုးတှေ ဖွဈလာခဲ့ပုံကို ကှငျးဆငျးလလေ့ာ သုံးသပျ ရေးသားထားပါတယျ။ ဥပမာ – အီရနျ၊ မလေးရှား၊ အငျဒိုနီးရှား၊ ပါကိစ်စတနျ၊ အာဖဂနျနစ်စတနျ စတဲ့ နိုငျငံတှအေကွောငျးကို ရေးသားထားပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့လညျး သူတို့ ကွုံခဲ့ရတဲ့ အလားတူ အတှအေ့ကွုံ အခြို့ကို တှကွေုံ့ ဖွတျသနျးနကွေရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
မိမိတို့ ဒီကနေ့ ပွောနကွေတဲ့ “အမြိုး ဘာသာ သာသနာ” အရေးမှာ – ဒီဘကျက တောငျ့ခံကွတဲ့သူတှေ ရှိသလို ဟိုဘကျက ပါနကွေတဲ့သူတှရှေိတယျ။ ဒီဘကျက တောငျ့ခံနကွေတဲ့သူတှရှေိသလို အခွား တဈဘကျမှာ ဒီဘကျက လူတှကေို အပွို ဖွိုခငျြနတေဲ့ သူတှရှေိတယျ။
“အမြိုး” ကိစ်စနဲ့ “ဘာသာ သာသနာ” ကိစ်စ တှမှော တူရူခကျြတှေ ရှိနပေုံကို မွငျရပါတယျ။
“အမြိုး” ကိစ်စ။ ဒီနိုငျငံရဲ့ နိုငျငံသားတှဟော သှေးအားဖွငျ့ ဆငျးသကျသူတှေ (blood descendent) တှေ ဖွဈရမယျ၊ soil descendent ဆိုတာမြိုး ဒီမွမှောမှေးတာနဲ့ နိုငျငံသားဖွဈမယျ လို့ သတျမှတျမပေးတဲ့ ၁၉၈၂ နိုငျငံသားဥပဒဖွေငျ့ တိတိပပ ပွဋ်ဌာနျးထားတယျ။ ဒီ ၈၂ ဥပဒကေို ကွပျကွပျမတျမတျ အရေးယူ ဆောငျရှကျခွငျးအားဖွငျ့ နိုငျငံရဲ့ အခြုပျအခွာကို ကာကှယျစောငျ့ရှောကျစလေိုသူတှေ ရှိတယျ။ အခွား တဈဖကျမှာ ဒီဥပဒတှေကေို အပေါကျဖောကျပွီး နိုငျငံသားပေးပဈလိုကျ ခငျြနကွေသူတှရှေိတယျ။
“ဘာသာ သာသနာ” ကိစ်စ။ ဒီ “ဘာသာ သာသနာ” ကိစ်စကို ဘာသာ သာသနာလို့ခညျြးသကျသကျမမွငျဘဲ နဲ့ ယဉျကြေးမှုကိစ်စလို့ မွငျကွညျ့နိုငျရငျ မိမိတို့ ဌာနတေိုငျးရငျးသားတှေ ရဲ့ အားထုတျမှုကို နားလညျမှု ပိုပေးနိုငျ ပါလိမျ့မယျ။ ယဉျကြေးမှုခငျြး ထိပျတိုကျတှကွေ့တဲ့အခါ မိမိတို့ အစဉျအဆကျ ကငျြ့သုံးရာ ဓလထေုံ့းတမျး၊ ယဉျကြေးမှုကို ပှနျးပဲ့ပပြောကျသှားတာ မဖွဈစလေိုတဲ့အတှကျ ကာကှယျစောငျ့ရှောကျဖို့ ကွိုးစားနကွေတာ လကျဆငျ့ထပျကမျးနိုငျအောငျ ကွိုးစားနတောပါ လို့ ရှုမွငျနိုငျရငျ ပွဿနာကို ဒီထကျမက နားလညျနိုငျ ပါလိမျ့မယျ။ ယဉျကြေးမှုလို့ မွငျကွညျ့မယျ့အစား ဘာသာရေး လို့ပဲ မကျြမွငျလက်ခဏာရပျ တဈခုတညျးကို ကောကျယူပွီး သုံးသပျဆုံးဖွတျမှုလုပျနရေငျ . . . ကမျြးမှာပါတဲ့အတိုငျး မကငျြ့ရကောငျးလား အပွဈတငျဖို့ကိုပဲ ကွညျ့နရေငျ . . . စာအုပျကွီးအတိုငျး လောကီ နဲ့ လောကုတျ ထကျခွမျးခွမျးဖို့ကွိုးစားနရေငျ . . . ဌာနတိုငျးရငျးသားတို့ရဲ့ ပငျမရစေီး ယဉျကြေးမှုကို အပွုတျဖွုတျဖို့ ကွိုးစားနမှေနျး သိသာလှနျးနရေငျ . . . ဝမျးနညျးစရာ ဖွဈရပျမြားဆီ ဦးတညျသှားမှာကိုပဲ စိုးရိမျမိပါတယျ။ ယဉျကြေးမှု ဓလထေုံ့းတမျးသဘောကို မနုဿဗဒေအရ ရိုးရိုးရှငျးရှငျး နားလညျ ပေးလိုကျတာက အမွငျမြားကို ရှငျးလငျးစပေါတယျ။
ဒီအခကျြတှကေို မဖွဈမနေ ထောကျပွဖို့လိုအပျလို့ ထောကျပွ ပွောဆိုရှငျးလငျးတာက တဈပိုငျး. . . တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု (rule of law) မရှိ လုပျခငျြရာလုပျကွတာကို လကျမခံတာက တဈပိုငျး ဖွဈပါတယျ ရယျ လို့ ဆောငျးပါး အဆုံးသတျမှာပွောခဲ့ပါရစေ။
၂၀၁၆-ခုနှဈ ဇူလိုငျလ (၉) ရကျ
Previous နိုငျငံ၊ လူမြိုးနှငျ့ အခြုပျအခွာ အာဏာကို စောငျ့ရှောကျသော ဥပဒေ (အပိုငျး ၃)
Next Video | Talk on 1982 Myanmar Citizenship Law by U Kyaw Zaw Oo